ခင်ချင်လို့ပါညလေးရယ်… ခင်တတ်ပါတယ်ကွီးရယ်..ဒီကစခဲ့တာပါ - Real Gaming Myanmar
Hi hi… ဘူလဲ.. ခင်ချင်လို့ပါညလေးရယ်… ခင်တတ်ပါတယ်ကွီးရယ် ……. ခင်ပါရစေဆိုတိုင်းမခင်မိပါစေနဲ့။ ဇာတ်လမ်းက ဒီကစခဲ့တာပဲ …. ။
facebook/messenger မှာ အယုံလွယ်သူ မိန်းကလေးများအား ပစ်မှတ်ထားကျူးလွန် မှုများရှိသဖြင့် ယုံကြည်ခဲ့သူ မိန်းကလေးအချို့အတွက် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ကြပြီ … ။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူမိန်းကလေးသည် ဖေ့ဘုတ်တွင် ထက်နေအောင်ဆိုသူနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီး၍ ထက်နေအောင် မှ အဆိုပါမိန်းကလေးအား ၉ ၃ ၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၆ နာရီအချိန်တွင်တွေ့ဆုံရန်ချိန်ဆိုပြီး မိန်းကလေးရှိသော မန္တလေးမြို့ စွယ်တော်ဘုရားသို့ ဆိုင်ကယ်ယာဉ်အမှတ် ၂၀ယ/ ၁၆၄၉၀ ဒရမ်း ၁၂၅ အမျိုးစားဆိုင်ကယ်ဖြင့် လာရောက်၍ စစ်ကိုင်းဘက်သို့ဘုရားဖူးသွားရန်ခေါ်ခဲ့ဖြင့်လိုက်ပါခဲ့သည် … ။နံနက် ၇ နာရီအချိန်ခန့်တွင် စစ်ကိုင်းမြို့ကောင်းမှုတော်ဘုရားမြောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသည့်အခါ တောလမ်းအတိုင်းခေါ်သွား၍ ၄င်းဧ။်ဆိုင်ကယ်အားရပ်ပြီး မိန်းကလေးဝတ်ဆင်ထားသော လက်စွပ်အားချွတ်ပြခိုင်းသဖြင့် ချွတ်ပြခဲ့ရာ လက်စွပ်မှာ လက်ရာကောင်းသည်ဟုပြောခဲ့ပါတယ် …. ။
ထို့နောက် လည်ပင်းမှ ရွှေဆွဲသီးပါ ရွှေဆွဲကြိုးကိုလည်း လက်ရာကောင်းတယ်ဟုပြော၍ ဆွဲဖြုတ်ယူရာ အဆိုပါမိန်းကလေးမှ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်မည်ဟုပြုစဉ် ၄င်းဧ။်ခါးကြားတွင်အင်္ကျီနှင့်ဖုံးထားသော ဓါးမြှောင်အား ထုတ်ပြချိန်းခြောက်၍ ရွှေထည်ပစ္စည်းများယူဆောင်ကာ ထက်နေအောင်ဆိုသူသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည် … ။ရွှေလက်စွပ်နှင့် ရွှေဆွဲသီးပါဆွဲကြိုး ကာလတန်ဖိုး စုစုပေါင်းငွေ ၁၃ သိန်းကျပ်ခန့်အား လုယူသွားပါသဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သည် … ။
အဆိုပါလုယက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် တရားခံအားဖမ်းဆီးနိင်ရေးအတွက် စစ်ကိုင်းခရိုင်မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲအုပ်အောင်စိုးမင်းနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်း၍ အခင်းဖြစ်ရပ်ရှိ သက်သေများအား ရှာဖွေစုဆောင်းခဲ့ရာ အဆိုပါတရားခံအား မတ်လ ၂၅ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်ခန့်တွင်ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုရဲအရာရှိတစ်ဦးထံမှသိရသည် … ။အဆိုပါလူဧ။် messenger တွင် မိန်းကလေးတော်တော်များများနှင့်ပြောဆို၍ တွေ့ဆုံရန်ချိန်းဆိုမှုများ တွေ့ရသည် … ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ online မုဆိုးဧ။် ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရသူများရှိခဲ့ပါကစစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းတွင်လာရောက်တိုင်တန်းနိင်ပါကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့်အယုံလွယ်ကြသူများ နောက်နောင်ယခုကဲ့သို့ဖြစ်စဉ်များမဖြစ်ပွားစေရေးသင်ခန်းစာများရစေရန် အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါသည် …. ။
Hi hi… ဘူလဲ.. ခငျခငျြလို့ပါညလေးရယျ… ခငျတတျပါတယျကှီးရယျ ……. ခငျပါရစဆေိုတိုငျးမခငျမိပါစနေဲ့။ ဇာတျလမျးက ဒီကစခဲ့တာပဲ …. ။
facebook/messenger မှာ အယုံလှယျသူ မိနျးကလေးမြားအား ပဈမှတျထားကြူးလှနျ မှုမြားရှိသဖွငျ့ ယုံကွညျခဲ့သူ မိနျးကလေးအခြို့အတှကျ ဒုက်ခပငျလယျဝခေဲ့ကွပွီ … ။
ဖွဈစဉျမှာ ပွဈမှုကြူးလှနျခံရသူမိနျးကလေးသညျ ဖဘေု့တျတှငျ ထကျနအေောငျဆိုသူနှငျ့ ခငျမငျရငျးနှီး၍ ထကျနအေောငျ မှ အဆိုပါမိနျးကလေးအား ၉ ၃ ၂၀၁၉ ရကျနေ့ နံနကျ ၆ နာရီအခြိနျတှငျတှဆေုံ့ရနျခြိနျဆိုပွီး မိနျးကလေးရှိသော မန်တလေးမွို့ စှယျတျောဘုရားသို့ ဆိုငျကယျယာဉျအမှတျ ၂ဝယ/ ၁၆၄၉၀ ဒရမျး ၁၂၅ အမြိုးစားဆိုငျကယျဖွငျ့ လာရောကျ၍ စဈကိုငျးဘကျသို့ဘုရားဖူးသှားရနျချေါခဲ့ဖွငျ့လိုကျပါခဲ့သညျ … ။နံနကျ ၇ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ စဈကိုငျးမွို့ကောငျးမှုတျောဘုရားမွောကျဘကျသို့ ရောကျရှိသညျ့အခါ တောလမျးအတိုငျးချေါသှား၍ ၄ငျးဧ။ျဆိုငျကယျအားရပျပွီး မိနျးကလေးဝတျဆငျထားသော လကျစှပျအားခြှတျပွခိုငျးသဖွငျ့ ခြှတျပွခဲ့ရာ လကျစှပျမှာ လကျရာကောငျးသညျဟုပွောခဲ့ပါတယျ …. ။
ထို့နောကျ လညျပငျးမှ ရှဆှေဲသီးပါ ရှဆှေဲကွိုးကိုလညျး လကျရာကောငျးတယျဟုပွော၍ ဆှဲဖွုတျယူရာ အဆိုပါမိနျးကလေးမှ အျောဟဈအကူအညီတောငျမညျဟုပွုစဉျ ၄ငျးဧ။ျခါးကွားတှငျအကငြ်ျီနှငျ့ဖုံးထားသော ဓါးမွှောငျအား ထုတျပွခြိနျးခွောကျ၍ ရှထေညျပစ်စညျးမြားယူဆောငျကာ ထကျနအေောငျဆိုသူသညျ ဆိုငျကယျဖွငျ့မောငျးနှငျထှကျပွေးသှားခဲ့သညျ … ။ရှလေကျစှပျနှငျ့ ရှဆှေဲသီးပါဆှဲကွိုး ကာလတနျဖိုး စုစုပေါငျးငှေ ၁၃ သိနျးကပျြခနျ့အား လုယူသှားပါသဖွငျ့ စဈကိုငျးမွို့မရဲစခနျးတှငျအမှုဖှငျ့တိုငျကွားခဲ့သညျ … ။
အဆိုပါလုယကျမှုဖွဈပှားခဲ့သဖွငျ့ တရားခံအားဖမျးဆီးနိငျရေးအတှကျ စဈကိုငျးခရိုငျမှုခငျးနှိမျနငျးရေးရဲတပျဖှဲ့မှရဲအုပျအောငျစိုးမငျးနှငျ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊နယျမွခေံရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားပူးပေါငျး၍ အခငျးဖွဈရပျရှိ သကျသမြေားအား ရှာဖှစေုဆောငျးခဲ့ရာ အဆိုပါတရားခံအား မတျလ ၂၅ ရကျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျဖျောထုတျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့သညျ။ပွဈမှုကြူးလှနျသူအားဥပဒအေတိုငျးဆကျလကျအရေးယူဆောငျရှကျသှားမညျဟုရဲအရာရှိတဈဦးထံမှသိရသညျ … ။အဆိုပါလူဧ။ျ messenger တှငျ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားနှငျ့ပွောဆို၍ တှဆေုံ့ရနျခြိနျးဆိုမှုမြား တှရေ့သညျ … ။
သို့ဖွဈပါ၍ online မုဆိုးဧ။ျ ပဈမှတျထားခံခဲ့ရသူမြားရှိခဲ့ပါကစဈကိုငျးမွို့မရဲစခနျးတှငျလာရောကျတိုငျတနျးနိငျပါကွောငျး၊ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့အယုံလှယျကွသူမြား နောကျနောငျယခုကဲ့သို့ဖွဈစဉျမြားမဖွဈပှားစရေေးသငျခနျးစာမြားရစရေနျ အသိပေးတငျပွလိုကျပါသညျ …. ။
Previous: တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြင်းပြင်းပြပြသတိရနေတဲ့ခံစားချက်ကို သက်သာစေဖို့ ဒီအချက်(၆)ချက်ကို လုပ်ပါ
Next: ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်​​ပျော်​​နေ​ပေမယ့်​ ​ရောင်းမယ့်​ပန်းကုံး​လေး​တွေကိုတော့ အောက်မကျစေချင်ဘူး